Maroc-Madagasikara:NAMETRAKA FOTODRAFITRASA LOVAIN-JAFY -
AccueilRaharaham-pirenenaMaroc-Madagasikara:NAMETRAKA FOTODRAFITRASA LOVAIN-JAFY
24/11/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nitovy fomba fijery ny Roi du Maroc Mohamed VI sy ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Samy mifototra amin’ny fanorenana fotodrafitrasa maharitra ho an’ny taranaka ny azy ny famaritana ny atao hoe « fampandrosoana ». Ho an’ny filoha Hery Rajaonarimampianina, dia lovain-jafy ireny fotodrafitrasa maharitra nataony ireny, na io lalana, na io tetezana, na io toho-drano, na io hopitaly, na io seranan-tsambo sns…Ilain’ny vahoaka ireny ary ho an’ny vahoaka ihany koa. Tsy vita iray andro ny fanorenana fotodrafitrasa maharitra fa mila fotoana.
Tsy mifanalavitra amin’izany koa ny fomba fahitan’ny Roi du Maroc an’izany fampandrosoana izany. Nametrahany fotodrafitrasa maharitra lovain-jafy ao Antsirabe. Io no hitany fa fampandrosoana goavana sy anjara birikiny ho fampandrosoana an’i Madagasikara. Omaly no napetraka tao Ambohimanarivo Antsirabe ny vato fehizoron’ireo fotodrafitrasa lehibe natolony an’Antsirabe. Izy tenany sy ny filoha Hery Rajaonarimampianina no tonga nametraka izany tamin’ny fomba ofisialy tany an-toerana.
Hopitaly lehibe ho an’ny reny sy ny zaza, haorina anatin’ny velaran-tany 5 hekitara izy io napetraka omaly io. Mahatratra 48 milliard dolara ny tentim-bidiny. Hanomboka amin’ny volana Marsa 2017 ny fanamboarana ary ho vita afaka roa taona. Mahazaka mandray marary 20 000 isan-taona any ity toeram-pitsaboana goavana indrindra aty amin’ny ranomasimbe indianina ity. Rehefa salama sy voajery tokoa ny lafin’ny fahasalaman’ny vahoaka, dia handroso ho azy ny firenena satria afaka mamokatra.
Miara-dalana amin’io koa ny fananganana ivon-toerana fanofanana arak’asa ao Antsirabe ihany, izay haorina amin’ny velaran-tany 3 hekitara. Mahatratra 18 miliara ariary ny tentim-bidiny. Ny sehatry ny tao-trano sy ny asa vaventy no fototry ny fanofanana arak’asa amin’izany ka afaka handray mpiofana 1 000 isan-taona. Samy niaiky ny firenena roa tonta fa io fiofanana arak’asa io no isan’ny fanalahidy ho an’ny tsy fananana asa. Hamorona asa maro ho an’ny tanora ny fisian’io. Ho vita afaka roa taona ihany koa ny asa rehetra. Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta avokoa izany. Fifanaovan-tsonia miisa 22 moa no efa neken’i Maroc hiaraha-hiasa amin’i Madagasikara, ankoatra ireto fanorenana fotodrafitrasa ireto. Nosafidian’ny firenena Marokanina kosa ny tanànan’Antsirabe satria io no tanana mifamatotra ara-tantara azy ireo. Tao Antsirabe no nandraisana ny raiben’i mpanjakan’i Maroc fony izy nataon’ny frantsay sesitany tamin’ny taona 1954.